Arduino ဆိုတာဘာလဲ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Arduino Project နှင့် Hardware လောကအတွက်၎င်း၏ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကြားသိခဲ့ကြရသော်လည်းအမှန်တရားမှာ Arduino သည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တိတိကျကျသိရှိပြီး၎င်းဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နိုင်သည်၊
ယနေ့ခေတ်တွင်ရရန်အလွန်လွယ်ကူသည် တစ်ခု arduino ဘုတ်အဖွဲ့ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့သိထားသင့်တာကရိုးရိုးဟာ့ဒ်ဝဲဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုထက်ပိုပြီးတစ်ခုခုရှိဖို့လိုတယ်။ အဲဒီမှာကြိုးအနည်းငယ်နဲ့ LED မီးသီးအချို့ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်။
3 Raspberry Pi နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။
6 အချို့ Arduino ဘုတ်နှင့်လုပ်နိုင်သောစီမံကိန်းများ
Arduino စီမံကိန်းက Hardware လှုပ်ရှားမှုပါ မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆိုနောက်ဆုံးနှင့်လည်ပတ်သောအီလက်ထရွန်နစ်စီမံကိန်းများကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးစေရန်ကူညီပေးသော PCB သို့မဟုတ် Printed Circuit board တစ်ခုဖန်တီးရန်ရှာသည်။ ထို့ကြောင့်ပန်းကန် Arduino သည် PCB ဘုတ်အဖွဲ့မဟုတ်ပါ။ လိုင်စင်ပေးရန်မလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအကြိမ်ပေါင်းများစွာပုံတူပွားနိုင်သည် သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏အသုံးပြုမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဖန်တီးမှုအတွက်မူတည်သည်။
ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှု (Arduino Project) သည်လုံးဝအခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲတီထွင်မှုကိုရှာဖွေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုကိုယ်ပိုင်ဘုတ်များကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီး ၄ င်းတို့ကိုအပြည့်အ ၀ လည်ပတ်စေနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့ဝယ်နိုင်သည့်ဘုတ်များကဲ့သို့လည်ပတ်စေသည်။
စီမံကိန်းကို IVREA Institute မှကျောင်းသားများသည် BASIC Stamp microcontroller ဖြင့်ဘုတ်များအစားထိုးရန်ရှာဖွေနေစဉ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဤသံမဏိပြားများသည်တစ်ယူနစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျော်ကုန်ကျပြီးမည်သည့်ကျောင်းသားအတွက်မဆိုစျေးနှုန်းမြင့်မားသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်လွတ်လပ်ပြီးအများပြည်သူဆိုင်ရာဒီဇိုင်းရှိသော်လည်းအဆုံးတွင်အသုံးပြုသူအားကျေနပ်မှုမရှိသောပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ Atmega2003 microcontroller ရောက်ရှိသည့်အချိန်တွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် board ကိုစွမ်းအားမြှင့်တင်ရုံသာမက၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုတတ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့် Arduino board model များ $ 100 ကုန်ကျနိုင်သည့်ယနေ့အထိရောက်ရှိနေသည်။
စီမံကိန်းကို ၄ င်း၏အမည်ကို IVREA Institute အနီးရှိသက်သေမပေါ်မီမှရရှိသည်။ ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီစီမံကိန်းကိုအီတလီမှာတည်ရှိပြီးဒီတက္ကသိုလ်အနီးမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး Bar di Re Arduino (သို့) Bar del Rey Arduino လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းသားကဲ့ရဲ့စရာတစ်ခုရှိတယ်။ ဤနေရာ၏ဂုဏ်အသရေအတွက် စီမံကိန်းကိုတည်ထောင်သူများဖြစ်သော Massimo Banzi၊ David Cuartielles၊ Tom Igoe၊ Gianluca Martino နှင့် David Mellis, သူတို့ကပျဉ်ပြားကိုခေါ်ခြင်းနှင့် Arduino ပရောဂျက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှယနေ့အထိ Arduino စီမံကိန်းသည်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အီတလီနိုင်ငံပြင်ပ၌ရောင်းချသောစီမံကိန်းပြား၏တရားဝင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော Genuino ကဲ့သို့သောနာမည်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
Raspberry Pi နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။
အသုံးပြုသူများစွာသည် Raspberry Pi ဘုတ်ကို Arduino board နှင့်ရှုပ်ထွေးသည်။ အကြောင်းအရာအသစ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသူများအတွက်ပန်းကန်နှစ်ခုလုံးသည်အတူတူပင်ဖြစ်ဟန်တူသော်လည်းအမှန်တရားနှင့် ထပ်မံ၍ မဖြစ်နိုင်ပါ။ Arduino သည် microcontroller ပါသည့် PCB တစ်ခုဖြစ်သည် သူမှာ processor၊ GPU၊ ram memory မရှိ၊ microhdmi, wifi or bluetooth တို့လို output port တွေမရှိဘူး။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကို board ကို minicomputer အဖြစ်ပြောင်းပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Arduino ကပရိုဂရမ်ဘုတ်တစ်ခုဖြစ်ရင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုဖွင့်လို့ရမယ်၊ ပြီးတော့သုံးထားတဲ့ Hardware ကဒီပရိုဂရမ်ကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ LED မီးသီးကိုဖွင့် / ပိတ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် 3D ပရင်တာရဲ့အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းလိုအစွမ်းထက်တဲ့အရာတစ်ခုခုပဲ။
Arduino စီမံကိန်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားတယ်။ ပထမအမျိုးအစားမှာရိုးရှင်းသောဘုတ်၊ microcontroller PCB board ဖြစ်သည် y ဒုတိယအမျိုးအစားဒိုင်းသို့မဟုတ်တိုးချဲ့ပြားဖြစ်လိမ့်မည်, Arduino ဘုတ်တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုအတွက်၎င်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
လူကြိုက်အများဆုံး Arduino ဘုတ်ပုံစံများထဲတွင်
လူကြိုက်အများဆုံးသို့မဟုတ်အသုံးဝင်သော Arduino shield မော်ဒယ်များတွင် -
Arduino ဂျီအက်စ်အမ် Shield ကို
Arduino Proto Shield ကို
Arduino မော်တော် Shield ကို
Arduino WiFi Shield ကို
ပြားများနှင့်ဒိုင်းနှစ်မျိုးလုံးသည်အခြေခံမော်ဒယ်များဖြစ်သည်။ Arduino MEGA board ကိုစွမ်းအားကောင်းသော 3D Printer အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ပစ္စည်းများဖန်တီးသည့် CloneWars ပရောဂျက်ကဲ့သို့သောပိုမိုတိကျသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုတီထွင်ရန် Arduino အားရည်ရွယ်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုဤအရပ်မှကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။
ယင်းသည်ယုတ္တိမရှိဟုထင်ရသော်လည်း Arduino ဘုတ်အဖွဲ့သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချက်နှစ်ချက်လိုအပ်သည်။ ပါဝါနှင့် software ကို.
ပထမဆုံးအီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက၎င်းသည် usb ထည့်သွင်းမှုကြောင့်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်မှသို့မဟုတ်အခြားအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းမှထုတ်ယူနိုင်သည့်စွမ်းအင်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ Arduino ဘုတ်တွင်ရှိစေလိုသောပရိုဂရမ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖန်တီးရန်၊ စုစည်းရန်နှင့်စမ်းသပ်ရန်အထောက်အကူပြုမည့် Arduino IDE မှ software ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Arduino IDE သည်အခမဲ့ရယူနိုင်သောအခမဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်သည် ဒီဝဘ်။ အခြားမည်သည့် IDE နှင့် software ကိုမဆိုသုံးနိုင်သော်လည်း Arduino IDE ကိုအသုံးပြုရန်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည် ၎င်းသည် Arduino စီမံကိန်း၏တရားဝင်မော်ဒယ်များအားလုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးသောသဟဇာတဖြစ်မှုရှိပြီးမည်သည့်ပြallနာမျှမကကုဒ်ဒေတာအားလုံးကိုပေးပို့နိုင်သည်။.
အချို့ Arduino ဘုတ်နှင့်လုပ်နိုင်သောစီမံကိန်းများ
ဤစီမံကိန်း၏ရိုးရှင်းသောပန်းကန်ပြား (ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည့်မော်ဒယ်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စီမံကိန်းအချို့ကိုလူတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
သူတို့ထဲကအကျော်ကြားဆုံး gadget နဲ့ Arduino project ကိုကျော်ကြားမှုတစ်ခုကတော့သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး 3d ပရင်တာအထူးသဖြင့် Prusa i3 model ။ ဒီတော်လှန်ရေးသမား gadget သည် extruder နှင့် Arduino MEGA 2560 board ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
ဤစီမံကိန်း၏အောင်မြင်မှုအပြီးတွင်ထိုစီမံကိန်းနှစ်ခုကိုမွေးဖွားခဲ့သည် Arduino ကို အခြေခံ၍ 3D Printing နှင့်ဆက်စပ်သည်။ သူတို့ထဲကပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် 3D object scanner တစ်ခု ပန်းကန်ကိုသုံးနိုင်သည် Arduino UNO ဒုတိယတစ်ခုကတော့ 3D Printer များအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်နှင့်ဝိုင်ယာကြိုးအသစ်ကိုဖန်တီးရန် Arduino ဘုတ်ကိုသုံးတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
IoT ကမ္ဘာသည် Arduino တွင်စီမံကိန်းအမြောက်အမြားရှိသည့်နယ်ပယ်များသို့မဟုတ်အခြားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Arduino Yun သည်ဤစီမံကိန်းများအတွက်အီလက်ထရောနစ်သော့ခလောက်များ၊ လက်ဗွေရာခံကိရိယာများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံခံကိရိယာများစသည်တို့ကိုပြုလုပ်သောအကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်အင်တာနက်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ကြားရှိတံတားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသည် Arduino စီမံကိန်းနှင့် Arduino ပျဉ်ပြား၏သေးငယ်တဲ့အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပန်းကန်တွေဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပေးတဲ့အကျဉ်းချုပ်သေးသေးလေးပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ သူတို့ရဲ့အစဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကစပြီးအဲဒီအချိန်ကစပြီး၊ Arduino ဟာစွမ်းဆောင်ရည်တွေ၊ စွမ်းအားတွေသာမကစီမံကိန်းတွေမှာပါကြီးထွားလာတယ်Arduino သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Free Hardware ပရောဂျက်များအတွက်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်စီမံကိန်းအတွက်မဆိုအလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည့်အဆုံးမဲ့အချက်အလက်များ၊ ပုံပြင်များ၊ အငြင်းပွားစရာများနှင့်အဆုံးမဲ့အချက်အလက်များ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » Arduino ဆိုတာဘာလဲ